Ihlanganiswe ngokusetshenziswa okukhethekile Abakhiqizi Nabahlinzeki |I-China Ihlanganiswe ngokusetshenziswa okukhethekile kwe-Factory
isethi yejeneretha ye-trailer
I-trailer yeselula yohlobo lwe-diesel generator1.Idizayinelwe ngqo izimfuno amandla mobile evamile noma ensimini.2.Igobolondo lenziwe ngepuleti likathayela lekhwalithi ephezulu noma ipuleti eligobile, elinezici zokungagqwali, nokuvala kahle, njll.3.Amafasitela nezicabha zezinhlangothi ezine zifakelwe ukusekelwa okuzenzakalelayo kokufakwa kwamanzi, ukuvuleka kalula.4.Amasondo kachassis angaklanywa abe amasondo amabili, amane, ayisithupha ngokwesidingo samakhasimende.Idizayinwe ibe ngubra omanuwali, ozenzakalelayo, wehydraulic...
Ijeneretha ye-diesel ye-Container
Ijeneretha yohlobo lwesitsha se-Walter 1. Faka isitsha esingu-20'ft se-genset efika ku-1250kVA kanye nesiqukathi esingu-40'ft se-genset kusuka ku-1250kVA.2. I-genset ephelele ene-container ingathunyelwa ngqo ezokuthutha olwandle okonga izindleko zempahla.3. Ikotini emunca umsindo nensimbi enezimbobo kubekwe endaweni ezungezile ye-canopy, futhi nesicishamlilo.4. Isithulisi sezimboni sangaphandle, umphumela ohlangene kanye nesithulisi.5. AmaKhabhinethi alungise uhlelo lokuhlinzeka, igumbi lokulawula, izinhlelo zokukhanyisa,...
I-Silent Engine Diesel Generator
Ijeneretha yohlobo oluthulile i-Walter 1. Faka isiqukathi esingu-20'ft se-genset efika ku-1250kVA kanye nesiqukathi esingu-40'ft se-genset kusuka ku-1250kVA.2. I-genset ephelele ene-container ingathunyelwa ngqo ezokuthutha olwandle okonga izindleko zempahla.3. Ikotini emunca umsindo nensimbi enezimbobo kubekwe endaweni ezungezile ye-canopy, futhi nesicishamlilo.4. Isithulisi sezimboni sangaphandle, umphumela ohlangene kanye nesithulisi.5. AmaKhabhinethi alungise uhlelo lokuphakelwa, igumbi lokulawula, izinhlelo zokukhanyisa, i-co...
Ijeneretha yeDizili, Ijeneretha yeDizili ethule, I-Super Silent Diesel Generator, Perkins Generator 500kva, Isethi ye-Diesel Generator, I-Perkins 2500 Series Generator,